တွန်ဂန်ဘုရင်က ငွေကြေးလုံခြုံရေးအတွက် စီစဉ်ပေးတယ်။ - Token Myanmar
တွန်ဂန်ပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ဦးသည် Bitcoin ပြုလုပ်ရန် အဆိုပြုချက်နောက်ကွယ်တွင် ရှိနေသည် (BTC) El Salvador ၏ခြေရာအတိုင်းလိုက်၍ ပစိဖိတ်နိုင်ငံငယ်လေးတွင် တရားဝင်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း မေလတွင် လွှတ်တော်တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရန် လျာထားပြီး အစောပိုင်း လက္ခဏာများမှာ အားရစရာဖြစ်သည်။
Mataʻiʻulua ʻi Fonuamotu၊ Lord Fusitu'a မှ Tonga တွင် ချမ်းသာကြွယ်ဝလာစေရန် အစိုးရပိုင် မီးတောင်တူးဖော်ရေး စက်ရုံများကို အသုံးပြုရန် အစီအစဉ်များ လှုပ်ရှားနေကြောင်း၊
တွန်ဂါတွင် မီးတောင် ၂၁ လုံးရှိသည်။ “ဒါက လူ ၅,၀၀၀ တိုင်းအတွက် မီးတောင်တစ်ခုလို့ ဆိုလိုတယ်။” သူ့မိသားစု၏ မျိုးရိုးလိုက်မြေယာလုပ်ပိုင်ခွင့်မှတစ်ဆင့် မီးတောင်တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်သည်။
အဆိုပြုထားသော Bitcoin တူးဖော်မှုလုပ်ငန်းသည် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် မီးတောင်များ၏ ဘူမိအပူစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
“လူပေါင်း ၅၀၀၀ ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၂ မဂ္ဂါဝပ် လိုအပ်တယ်။ ဒါကြောင့် မဂ္ဂါဝပ် ၄၀,၀၀၀ က နိုင်ငံတော် မဟာဓာတ်အားလိုင်း တစ်ခုလုံးကို ဆောင်ရွက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မီးတောင်တစ်ခုစီသည် အချိန်တိုင်း 95,000 မဂ္ဂါဝပ်ထွက်ရှိပြီး များစွာအားလပ်စေသည်” ဟု Lord Fusitu'a ကဆိုသည်။
“ကျွန်တော်တို့ မိသားစုတိုင်းကို တဲအိမ်တွေ ပေးမယ်။ ဒါပေမယ့် မိသားစု 20,000 ပဲရှိတာကြောင့် ဒါက ယူနစ် 20,000 ပဲရှိပါတယ်။”
Tongan အစိုးရမှ မိသားစုတစ်ခုစီအား “လက်ဆောင်” ပေးရန်အတွက် မီးတောင်တစ်ခုစီသည် တစ်ရက်လျှင် Bitcoin ၏ $2,000 ထုတ်ပေးနိုင်သည်ဟု ၎င်းက အကြံပြုထားသည်။
လူပေါင်း 120,000 ရှိသော ကျွန်းတစ်ကျွန်းအတွက် စကေးအရေးနှင့် ပျမ်းမျှလူတို့သည် ကြီးမားသောအကျိုးအမြတ်အတွက် ရပ်တည်နေပါသည်။
မိသားစု Bitcoin hash တဲများ:. အရင်းအမြစ်- Lord Fusitu'a
Tonga သည် လည်ပတ်မှုတည်ဆောက်ရန်အတွက် ဒေါ်လာ ၂၆ သန်း လိုအပ်သော်လည်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ထိုရန်ပုံငွေအတွက် Tonga တွင် အပေါင်ပစ္စည်းမရှိဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဒေသန္တရနိုင်ငံရေးတွင် Lord Fusitu'a ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့် မီးတောင်တစ်လုံးကို သူကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုထားသည့်အချက်ကြောင့်၊ ၎င်းကို ဆွဲထုတ်လိုက်နိုင်သည်။
Lord Fusitu'a သည် သတ္တုတူးဖော်ရေးနည်းပညာ၏ အခမဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကို ညှိနှိုင်းခဲ့သည်ဟုလည်း ဆိုထားသော်လည်း သဘောတူညီချက်၏ စည်းကမ်းချက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပေ။ Bitmain ကဲ့သို့သော တရုတ်ကုမ္ပဏီများသည် ဤနေရာ၌ စျေးကွက်ဝေစုများစွာရှိသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ မကြာသေးမီက ပိတ်ပင်ထားသည့် ဒုက္ခသည် တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများသည် တွန်ဂါသို့ ဦးတည်သွားခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ လောလောဆယ်တော့ ဒါ ပဟေဠိဖြစ်နေတုန်းပဲ။
“နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက် သင်္ချာက မပြောင်းလဲပါဘူး။ အကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာ ပြည်နယ်တစ်ခုတွင် ကိုယ်ပိုင်သတ္တုတူးဖော်ရန်ဖြစ်သည်။”
Lord Fusitu'a က ဘယ်သူလဲ။
နိုင်ငံရေးသမားမဖြစ်မီက အတားအဆီးဖြစ်ခဲ့ဖူးသော Lord Fusitu'a သည် တွန်ဂန်မင်းမျိုးမင်းနွယ်ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
တွန်ဂါသည် တောင်ပစိဖိတ်ဒေသတွင် ကျန်ရှိသော ဌာနေဘုရင်စနစ်ဖြင့် တစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဓနသဟာယအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သော်လည်း ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် ရွေးချယ်မှုဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သမိုင်းတစ်လျှောက် နယ်ချဲ့နိုင်ငံများ၏ ဖိအားများကြားမှ တွန်ဂါသည် ဘယ်သောအခါမှ ကိုလိုနီမဖြစ်ခဲ့ပါ။
Lord Fusitu'a သည် ပြင်းထန်သောကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့်နယူးဇီလန်တွင်သုံးနှစ်ကြာနေထိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် COVID-19 ကြောင့် Tonga ၏နယ်စပ်များကိုပိတ်ပြီးနောက် 2021 ခုနှစ်နိုဝင်ဘာတွင်အမတ်အဖြစ်မှနုတ်ထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း သူ၏ဝမ်းကွဲဝမ်းကွဲသည် တွန်ဂါပါလီမန်တွင် နေရာယူထားသောကြောင့် Lord Fusitu'a ၏အဆိုအရ၊ သူ၏ပြည်တွင်းဥပဒေပြုရေးအစီအစဉ်သည် ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ဒဏ်ရာကြောင့် ဆေးခန်းတွင်သေဆုံးသူနှစ်ဦးမှာ သူ၏ရည်မှန်းချက်ကြီးသော အစီအစဉ်ကို အသိပေးထားသည်။ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့် ကျားမရေးရာ စွမ်းဆောင်မှု နှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများ ပါဝင်သော အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကမ္ဘာ့ပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့။
Cointelegraph နှင့်စကားပြောသောအခါတွင်၊ ခွဲစိတ်မှုများဆက်တိုက်ပြုလုပ်ပြီးနောက်တွင်အဖြစ်များသည့်အတိုင်း၊ သူသည် ရှပ်အင်္ကျီမပါဘဲတက်တူးများ ( Captain Cook မှပျက်စီးသွားသော Tongan စကားလုံး) သည် ၎င်း၏မျိုးရိုး၏တက်တူးသမိုင်းကြောင်းကို ပုံဖော်ထားသည့် ထောင်စုနှစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Lord Fusitu'a သည် 2013 ခုနှစ်ကတည်းက "Bitcoin တစ်ဦးတည်းသောလူ" ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း "အပြင်ပန်းက သင့်ကို မလှည့်ဖြားစေနှင့်" ဟု ရှစ်နှစ်သားအရွယ်တွင် စတင်ရေးသားခဲ့သည်။
စကားမပြောနိုင်၊ မျိုမချနိုင်ဘဲ သူ့စိတ်အားထက်သန်မှုကို ပြန်လည်အတည်ပြုပြီးမှသာ ဖတ်ခွင့်ရသည့်အချိန်သည် ဆေးရုံတက်နေရချိန်ဖြစ်သည်။ Bitcoin အကြောင်း ရိုက်နှိပ်ထားသော စကားလုံးတိုင်းကို ပြန်လည်ဖတ်ရှုခြင်း။
Lord Fusitu'a သည် ငွေလွှဲခြင်းဆိုင်ရာ ငွေပေးချေမှုအပေါ် အလွန်အမင်း မှီခိုနေရသည့် သူ့နိုင်ငံသည် Bitcoin မွေးစားခြင်းကို လိုက်စားသင့်သည်ဟူသော အကြောင်းအရင်းကို စာသားအတိုင်း ရေးပြသည့် Bitcoin စက်ဝိုင်းများတွင် အလွန်မြင်နိုင်သည်။
“၎င်းသည် အကြံအစည်ဆုံးသော ငွေဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ရှားပါးမှုနှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ခွဲဝေစာရင်းဇယား၏ ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒီမိုကရေစီ အမျှတဆုံးသော ငွေကြေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မှန်ကန်သောငွေ၊ တီထွင်ဖူးသမျှ အကောင်းမွန်ဆုံးသော ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် 200% တန်ဖိုးရှိသည်။ တန်ဖိုးရှိသော စတိုးဆိုင်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ ၎င်းသည် အထွတ်အထိပ် မြီရှင်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။"
"ဒါပေမယ့် မင်း El Salvador ဒါမှမဟုတ် Tonga တို့လို ငွေလွှဲပို့မှုအပေါ် မှီခိုနေတဲ့နိုင်ငံဆိုရင်၊ ဒါက ချက်ချင်းပဲ ဘဝပြောင်းသွားပြီ။ နိုင်ဂျီးရီးယား သို့မဟုတ် ဗင်နီဇွဲလားကဲ့သို့ ဆိုးရွားသော ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဒဏ်ကို ခံခဲ့ရသော နိုင်ငံများတွင် ပေါင်မုန့်တစ်လုံး (…) ဝယ်ရန် ဘီးလှည်း (…) လိုအပ်သည့် ဆင်းရဲသား လေးဘီလီယံအတွက် အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေး ယန္တရားတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
Fusitu'a သည် Tonga ၏စီးပွားရေးလည်ပတ်ပုံအား Cointelegraph သို့ပြောင်းလဲရန်အတွက် သူ၏အပိုင်းလေးပိုင်းအစီအစဉ်ကို ရှင်းပြခဲ့သည်။
အစီအစဉ်တွင် Bitcoin ငွေလွှဲခြင်းဆိုင်ရာ ငွေပေးချေမှုများ၊ Bitcoin တရားဝင်တင်ဒါအောင်ခြင်း၊ Tonga တွင် Bitcoin တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ထူထောင်ခြင်းနှင့် Tongan Bitcoin နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာတိုက်များ ဖန်တီးခြင်းတို့အကြောင်း တွန်ဂန်များအတွက် ဘဏ္ဍာရေးအသိပညာပေးခြင်းများ ပါဝင်သည်။
အစီအစဉ်၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းသည် ငွေလွှဲမှုအပေါ်တွင် စီးပွားရေးကို အများဆုံး မှီခိုနေရသော တွန်ဂါများအတွက် ဘဏ္ဍာနှစ် ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သည်။
သခင် Fusitu'a က ဤသို့ဆိုသည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲကမ္ဘာရှိ မိသားစုများသည် အိမ်သို့ငွေလွှဲရာတွင် လူလတ်ပိုင်းများထံမှ ဆိုးရွားစွာလိုအပ်သော ၀င်ငွေများစွာကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရသည့်အတွက် ငြီးငွေ့နေပါသည်။
နိုင်ငံရပ်ခြား အလုပ်သမား ၃၀၀,၀၀၀ နီးပါးကို နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ပြန်ပို့သည့် ငွေလွှဲမှုများကြောင့် တွန်ဂါ အမျိုးသားစီးပွားရေး၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို တည်ဆောက်ထားကြောင်း Lord Fusitu'a က ဆိုသည်။ ၎င်းတို့သည် ကျွန်းလူဦးရေ ၁၂၀,၀၀၀ ကို ပြန်ပို့ပေးသည်။ တွန်ဂန်ဒေသတွင် နေထိုင်သည့် လူဦးရေ နှစ်ဆကျော်သည် နိုင်ငံ့စီးပွားရေးအတွက် ငွေလွှဲပို့မှုများသည် အရေးကြီးပါသည်။
Tonga ၏ “2020 တွင် GDP သည် $510 million ရှိပြီး 40% သည် $200 million ကျော်သာရှိသေးသည်ဟု ဆိုသည်။ ဒါကြောင့် အဲဒီရဲ့ 30% ဒါမှမဟုတ် $60 million ဟာ Western Union တစ်ခုတည်းအတွက် အခကြေးငွေဖြစ်ပါတယ်။”
Western Union ၏ဆိုက်ရှိ ဂဏန်းပေါင်းစက်က သြစတြေးလျဒေါ်လာ သုံးသိန်းနီးပါး အခကြေးငွေ ပေးဆောင်သော်လည်း Western Union မှ ရွာသားများကို ကော်မရှင်များ 30% ကောက်ခံသောကြောင့် Bitcoin အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရာတွင် 30% uptick ပေးမည်ဟု Lord Fusitu'a က စောဒကတက်သည်။ လွှဲပြောင်းခြင်း။ သြစတြေးလျဒေါ်လာ 100 အရောင်းအဝယ်တစ်ခု။
သို့သော်၊ Lord Fusitu'a ကဤအချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်မဟုတ်ပေ။
"ဝဘ်ဆိုက်တွင်ပြသထားသည့် $100 တွင် $2.90 သည် ငွေလွှဲခြင်းအားလုံးတွင် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ 10-25% ခန့်ရှိကြောင်း၊ ၎င်းသည် ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသည့်နေရာမှ သင်ပေးပို့နေသည့်အပေါ် မူတည်၍ ငွေလွှဲမှုအားလုံးတွင် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ 10-25% ရှိကြောင်းပြသခြင်းမရှိပါ။ El Salvador သို့မဟုတ် Tonga မှ သင်၏ ပျမ်းမျှငွေလွှဲမှုသည် $50 မှ $100 ဖြစ်သောအခါ၊ ၎င်းသည် သင်၏ငွေလွှဲမှု အများအပြားဖြစ်သည်။ သြစတြေးလျဒေါ်လာဝယ်ယူမှု၊ ၎င်း၏ Tongan pa'anga သို့ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် TOP ကိုဝယ်ယူခြင်းအတွက် Forex slippage ကို သင့်အား ကောက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း ၎င်းမှပြသမည်မဟုတ်ပါ။"
Tonga သည် 2021 ခုနှစ်တွင် ငွေကြေးတတ်မြောက်မှုနှင့် "ပိုက်ဆံအလုပ်လုပ်ပုံ" ပညာရေးပရိုဂရမ်များကို စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပြီး ရပ်ရွာနယ်ချဲ့ရန်အတွက် အဖွဲ့များကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ “ငွေအလုပ်လုပ်ပုံ” ဆွေးနွေးပွဲက ဘယ်လိုပုံစံလဲ။ ရိုးရှင်းသော-
“လူတွေက သုံးနာရီကြာ ခရီးနဲ့ အသွားအပြန် ဘတ်စ်ကား လက်မှတ် $20 ကို နားလည်တယ်။ မြင့်မားသောငွေလွှဲခကိုပေးဆောင်ရန် Western Union တွင် တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေပါသည်။ ဒေါ်လာ 100 အစား ကောင်တာမှာ ရှိနေတဲ့ ဒေါ်လာ 70 က သူတို့ ရမယ်ထင်လို့။ ပြီးတော့ သူတောင်းစားရဲ့အခွန်က အပြင်မှာထိုင်နေတဲ့ သူတောင်းစားတွေ။ ရွာကိုပြန်ရောက်တိုင်း သုံးနာရီ၊ ကိုးနာရီကြာအောင်၊ ပင်ပန်း၊ ဗိုက်ဆာပြီး ငွေလွှဲခနဲ့ ဘတ်စ်ကားခတွေ ဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ မင်းရဲ့မူရင်း $100 ငွေလွှဲခ $40-50 ရဖို့ပဲလေ။"
ဆက်စပ်- Crypto ငွေလွှဲမှုများသည် ကလေးမွေးစားခြင်းကို တွေ့မြင်ရသော်လည်း မတည်ငြိမ်မှုသည် သဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
အရေးကြီးသည်မှာ၊ Tonga တွင် မိုဘိုင်းလ်-ပထမဆုံးအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှုန်း မြင့်မားပါသည်။
“အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိသော ဆဲလ်ဖုန်းသည် ဘဝကို ချက်ချင်းပြောင်းလဲနိုင်သည်” ဟု Lord Fusitu'a က ဆိုသည်။ ဘဏ်မရှိသူများအတွက် "ဆဲလ်ဖုန်းနှင့် နွေးထွေးသော ပိုက်ဆံအိတ်သည် မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်တွင်မဆို ၎င်းတို့၏ ပထမဆုံးပါဝင်မှုဖြစ်သည်။"
Moonwallet ကဲ့သို့ သင့်ဖောက်သည် ပိုက်ဆံအိတ်များကို မသိပါ။ ကူညီကြပါ ID မရှိသူများ။ "ဒါဟာ Bitcoin Bros အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါက တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ ဘဏ်မရှိတဲ့ ဆင်းရဲသားတွေအတွက် အလားအလာရှိတဲ့ ယန္တရားတစ်ခုပါ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ နှစ်စဉ်ငွေလွှဲရာတွင် ဆုံးရှုံးသွားသော ဒေါ်လာ ၇၀၀ ဘီလီယံ၏ အခကြေးငွေမှာ ဒေါ်လာ ၂၀၀ ဘီလီယံမှ ပျမ်းမျှမိသားစုကို ထိခိုက်စေပါသည်။"
ထို့အပြင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် တွန်ဂန်သည် ဆင်းရဲသားများအား ဒဏ်ပေးသည့် ဝင်ငွေခွန်ထက် စားသုံးခွန် (GST) 15% ကို ကောက်ခံခဲ့သည်။ Bitcoin ကို လက်ခံကျင့်သုံးပါက ပျမ်းမျှ Tongan များ၏ အိတ်ကပ်များတွင် ငွေပိုမိုရရှိပြီး Western Union အတွက် နည်းပါးသည် – စားသုံးခွန်အားဖြင့် အစိုးရဘဏ္ဍာငွေများကိုလည်း အကျိုးပြုမည်ဖြစ်သည်။
Lord Fusitu'a သည် တွန်ဂန်ဘာသာစကားဖြင့် အပတ်စဉ် ပြောဆိုသော Bitcoin အခြေခံများကို ပေးပါသည်။
ဥပဒေရေးရာ တင်ဒါ ဥပဒေကြမ်း
Lord Fusitu'a သည် Bitcoin အတွက် အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ ၏ ဥပဒေကြမ်းကို မထုတ်ပြန်မီ တရားဝင် တင်ဒါအဖြစ် ကြည့်ရှုပြီး “တော်တော်လေး ကာဗွန်ကော်ပီ” ကို ကျော်ဖြတ်ရန် ကြိုးစားသည်။
Tonga ၏ဥပဒေကြမ်းသည် 2021 ခုနှစ်ဇူလိုင်လကတည်းကစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီး Bitcoin သည် Tonga ၏ငွေကြေးဖြစ်သော paʻanga နှင့်အတူတရားဝင်တင်ဒါအောင်မည်ဖြစ်သည်။
El Salvador ၏အငြင်းပွားဖွယ် Bitcoin ဥပဒေ၏ ပုဒ်မ7ကဲ့သို့ပင်၊ အဆိုပါဥပဒေကြမ်းသည် ကမ်းလှမ်းခံရပါက လက်ခံရန် Bitcoin ကို မဖြစ်မနေပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဥပဒေကြမ်းအား လာမည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလတွင် ကျင်းပမည့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းမည်ဖြစ်သည်။ အတည်ပြုရန်အတွက် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၂၆ ဦးအနက် အနည်းဆုံး ၁၄ ဦး၏ အများစု၏ အတည်ပြုချက် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
ပါလီမန်အဖွဲ့ဝင် ကိုးဦးသည် “ပိတ်ဆို့မဲများ” ပေးသော မျိုးရိုးလိုက်သခင်များဖြစ်ပြီး ပါလီမန်တွင် တစ်ဦးတည်းသောရှေ့နေနှင့် ရှေ့နေအဖြစ် Fusitu’a ၏ ဦးဆောင်မှုကို အမြဲတမ်း “အမြဲ” လိုက်နာသည်ဟု ယူဆရသည်။ အခြားရွေးချယ်ခံအဖွဲ့ဝင် သုံးဦးသည် Bitcoin နှင့် ထိတွေ့မှုရှိသည်။ နောက်ထပ် ဆယ့်လေးမဲ နှစ်မဲသာ လိုအပ်ပြီး အောင်မြင်သော မဲအများစုကို ရရှိနိုင်မည်ဟု ယူဆပါသည်။
Lord Fusitu'a သည် Tongan လူစုလူဝေးများထံမှ ငွေလွှဲမှုများတွင် သဘာဝအလျောက် အကျုံးဝင်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားသည် Tonga သို့ Bitcoin ပြန်ပို့မှုများသည် 2021 ခုနှစ်တွင် တိုးလာကြောင်း ၎င်းကဖော်ပြသည်။
၎င်း၏ အဓိကထွက်ကုန်တင်ပို့မှုကို ကာကွယ်ရန် ၎င်းကို အတုပြုလုပ်၍ နိမ့်ကျနေသည့် ငွေကြေးငါးမျိုးဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော်လည်း ယင်းကြောင့် သွင်းကုန်များ စျေးကြီးသည်။
ဆက်စပ်- အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ- 2021 ခုနှစ်တွင် Bitcoin Law နှင့် မည်သို့စတင်ခဲ့သည်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။
Lord Fusitu'a ၏ လေးမှတ်မြောက် Bitcoin အစီအစဉ်၏ နောက်ဆုံးအပိုင်းသည် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို တားဆီးရန်အတွက် Bitcoin ၏ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာတိုက်များကို တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Bitcoin ၏ အသုံးဝင်မှုအပေါ် သခင်၏ အတွေးအမြင်များသည် ရိုးရာစီးပွားရေးမူဝါဒတွင် အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်သော ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကို အသိပေးခဲ့သည်။
“ထွန်းသစ်စစျေးကွက်များသည် အစဉ်အလာအားဖြင့် 'တစ်နှစ်လျှင် 5% အရည်ပျော်ခြင်း' USD တွင် 'တစ်နှစ်လျှင် 2-6%' နှင့် '2008 ခုနှစ်ကတည်းက' US ငွေချေးစာချုပ်များတွင် 'အနုတ်လက္ခဏာအထွက်နှုန်း' ဖြင့် ထိန်းထားသည်။ ငါတို့လည်း ဒီလိုလုပ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ $700 သန်း နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာတိုက်များကို မတ်လ 2020 တွင် BTC သို့ ပြောင်းရွှေ့ပါက ၎င်းတို့သည် 2021 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် $22.5 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိမည်ဖြစ်သည်။"
"2020 GDP $510 million နဲ့ $22.5 billion ဟာ 11 လအတွင်း ရရှိခဲ့တဲ့ Tongan စီးပွားရေး ကုန်ထုတ်စွမ်းအား 45 နှစ်နဲ့ ညီမျှပါတယ်" လို့ Nayib Bukele က Twitter မှာ လှောင်ပြောင်ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါ သူဆိုလိုတာက၊ သူသည် သူ၏နိုင်ငံဘဏ္ဍာငွေများကို ဝယ်ယူမှုတစ်ခုစီဖြင့် BTC သို့ ထိုလူသေသုံးကောင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများမှ ပြောင်းရွှေ့နေသည်။"
Bukele သည် ၎င်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် ဝေဖန်ခံခဲ့ရသော်လည်း ဤဝေဖန်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် ၎င်း၏ အုပ်ချုပ်မှုသဘောသဘာဝမှ ပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ Lord Fusitu'a ၏ နိုင်ငံစုံအဖွဲ့များတွင် ပါဝင်ခြင်းမှတ်တမ်းက သူ့နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအနာဂတ်ကို လုံခြုံစေရန် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန် ပိုမိုသင့်လျော်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။
ဒါပေမယ် ရှင်းရှင်းပြောရရင် တခြားနိုင်ငံတွေက သူ့ယုတ္တိကို ဘာကြောင့် မလိုက်နာတာလဲ။ “သူတို့က ယုတ္တိကိုမြင်ပေမယ့် အမွေအနှစ်ဘဏ္ဍာရေးကနေ ပိုက်ဆံယူတယ်” ဟု Lord Fusitu'a က ဆိုသည်။
အခြား ပစိဖိတ်ကျွန်း၊ Palau သည် Ripple's တွင် တည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးပြားကို ဖြန့်ချိနေပါသည်။ XRP. "သူတို့ ရူးနေကြတာလား? Ripple နှင့် XRP နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် အမွေအနှစ်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရထားလမ်းများ ပါဝင်သောကြောင့် ၎င်းတို့၏ချဉ်းကပ်မှုသည် ပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်။"
နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးမူဝါဒ အန္တရာယ်များသည် တွန်ဂါအတွက် ရှိနေသေးသည်။ 2021 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင်၊ Internal Monetary Fund မှ ငွေကြေးတည်ငြိမ်မှုအား ထိန်းညှိသူများ ငွေကြေးတည်ငြိမ်မှုမသေချာပါက crypto ဂေဟစနစ်များသည် တရားဝင်ငွေကြေးများကို “ဘဏ်မဲ့” ထွန်းသစ်စနိုင်ငံများတွင် တရားဝင်ငွေကြေးများဖြင့် အစားထိုးနိုင်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသည့် အစီရင်ခံစာတစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် IMF က Tonga ကို အာရုံစိုက်နေတယ်ဆိုတာကို ပြသနေတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တရားဝင်တင်ဒါနှင့် Bitcoin တူးဖော်မှုအစီအစဉ်နှစ်ခုလုံးတွင် Lord Fusitu'a သည် အကောင်းမြင်သည်။ "Bitcoin အသိုက်အဝန်းသည် အောက်တန်းကျသောအနိုင်ရမှုကို မြင်တွေ့ရသည်ကို နှစ်သက်သည်။"
Crypto Land မှလူများကဲ့သို့ပင် Lord Fusitu'a သည် ဉာဏ်ကြီးရှင် သို့မဟုတ် ကြီးမြတ်သောပြသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံး။
admin 85180 posts0comments